Bromantane (87913-26-6) hplc≥98% Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Bromantane waa daroogo si cad u hagaajisa waxqabadka maskaxda iyo muuqaalka. Waxay kaa caawin kartaa in aad yareyso daalka iyo welwelka, hagaajinta barashada, iyo caawinta dhaqdhaqaaqa jirka.
Bromantane (87913-26-6) Smamnuucista
Magaca Kiimikada N- (4-bromophenyl) adamantan-2-amine
Fasalka Daroogada Maqnaanshaha maskaxda iyo daawada anxiolytic
Molecular Wsideed 306.24g
barafku Psaliid 106-108 ° C
Boiling Point 404.8 ± 28.0 ° C ee 760 mmHg
Biological Life-Life Saacadaha 2.75 ee haweenka, iyo saacadaha 4.0 ee ragga.
SOlubility Iskaashi la'aanta biyaha, leysku daro acetone
Application Bromantane (Ladasten) waa daroogo si wax ku ool ah u hagaajisa waxqabadka maskaxda iyo muuqaalka. Waxay kaa caawin kartaa in aad yareyso daalka iyo welwelka, hagaajinta barashada, iyo caawinta dhaqdhaqaaqa jirka.
Waa maxay Bromantane (87913-26-6)?
Bromantane waxay caan ka noqotay dadka isticmaala buugta badan oo sanado badan leh askar badan iyo ciyaaryahano badan oo isticmaalaya tan iyo 80s. Bromantane waxay ku dhacdaa saameyn kicin iyo walwal wakhti isku mid ah. Inkasta oo labadan saameynood ay u muuqdaan inay diidaan saameynaha kale, waxaad u baahan tahay inaad xusuusato xaqiiqda ah in Bromantane ay tahay mid aan fiicnayn sababta oo ah waa niyadjab maskaxeed iyo kiciyaha oo dhan mid.
Waxaa loo isticmaalay in lagu wanaajiyo dib u soo kabashada kadib dhaqdhaqaaq jireed oo jilicsan. Waxay wali ku jirtaa geeddi-socodka cilmi-baarista si loo go'aamiyo in loo isticmaali karo daawada isboortiga sababtoo ah dad badan oo hore u adeegsaday horey u soo sheegey in ay si weyn u kordhiyeen waxqabadkooda ciyaaraha fudud. Waxaa sidoo kale la yiraahdaa kor u qaadida feejignaanta qofka iyo sidoo kale dhiirrigelinta iyo tamarta guud ee maskaxda.
Sidee Bromantane (87913-26-6) shuqullada
Nidaamka Bromantane ee ficilka wuxuu ku xiran yahay nidaamka serotonergic iyo dopaminergic neurotransmitter. Hadda waxaad horey u maleyn kartaa sida ay u shaqeyso. Saameyntiisa waxaa keena dareenka Bromantane oo xakameynaya dib u soo celinta dopamine iyo serotonin labadaba. In kasta oo aan weli la ogeyn sida ay u kordhiso norepinephrine ee jirka ku jirta, waxaa laga shakisan yahay inay sidaas sameeyaan. Intaa waxaa dheer, sifooyinka walbahaarka ah ee Bromantane ay ka dhalatay sidii ay u xoojin lahayd dhexdhexaadinta GABA-ergic.
Bromantane (87913-26-6) Qiyaasta
Marka hore, qaado tartiib tartiib ilaa aad ka ogaato sida jidhkaagu uga falceliyo isticmaalka iyo inta uu ku adkeysan karo. Saameynta Bromantane waxay bilaabmaysaa inay ku dhufato sida ugu hooseysa 10mg, qiyaastaada waxay ku xiran tahay waxaad rabto inaad ku guuleysato. Sida bilowga, waxaad bilaabi kartaa adoo qaadanaya hal mar maalintii kahor qalliinka si aad u isticmaasho laba jeer maalintii.
Waxyaabaha kale ee lagaa rabo inaad ogaatid waa in qiyaasta Bromantane ay tahay mid ku xiran galmada sababtoo ah waxaa si dhakhso ah loogu nuujiyaa dadka isticmaala dumarka. Nolosha Nolosha Bromantane waxay aad ugu gaaban tahay haweenka marka loo eego ragga. Dumarka waxay qaataan saacadaha 2.75 si ay u bilaabaan dareenka saameynta Bromantane inta ay ragga ku qaadato afar saacadood inay dareemaan saameyn isku mid ah. Maadaama ay tahay lipophilic aad u sarreeya, nootropic this si fudud u nuugo by marinka mindhicirka ee mar hore loo qaaday hadal ahaan.
Celceliska qiyaasta Bromantane waxay ka bilaabataa 50-200mg iyo qiyaas kasta oo ka sarreysa 300mg laguma talinayo. Caadi ahaan dad badan waxay jecel yihiin inay qaataan 100-200mg maalin kasta laba goor maalintii, taas oo micnaheedu yahay in qofku qaato qiyaasta 50-100mg inta lagu jiro subaxda iyo fiidka. Isticmaalaan tan laba ilaa afar toddobaad ee soo socota ayaa kaa caawin doonta inaad garato natiijooyinkaaga ugu fiican.
Bromantane (87913-26-6) Faa'iidooyinka
Waxay aaminaysaa walaaca iyo walbahaarka
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad ku socoto daal maskaxeed waxaana laga yaabaa inaad dareentid inaad gaartay dhibcahaaga. Inta lagu jiro xilligan, waxaad dareemeysaa farxad aad u fog fogaantaada. Waa caadi, iyo warka wanaagsan waa in qaadashada Bromantane kaa caawiso inaad la qabsato dareenkan oo aad noloshaadii dib u hesho. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka Bromantane ayaa ah inay dhiirrigeliso dareenka nasashada, waxay kordhisaa caabbinta jidhka ee walaaca iyo sidoo kale inay gacan ka geysato beddelidda kiimikada maskaxda ee laga yaabo inay ku dhufato cadaadiska. Natiijo ahaan, marka aad qaadato Bromantane, mar dambe ma dareemi doonto wax dhib ah oo ah walaac iyo walaac.
Kuwa isticmaala Bromantane waxay qirsan yahiin in ay ka caawiso inay helaan biilal badan marka ay samaynayaan waxqabadkooda. Tusaale ahaan, masaafo u muuqata inay u muuqato mid dhib badan waxay dareemaysaa wax yar. Maaha oo kaliya maaratoonayaasha macaamiisha ah, laakiin qofkasta oo niyadjab ku ah dhaqdhaqaaqa jirka. Waxaad ogaan doontaa in adigoo adeegsanaya kaalmada Bromantane, waxaad awood u leedahay in aad wax badan ku qabato tamar iyo xoog badan mudo dheer. Sidaa darteed, waxaad la yaabi doontaa inta aad awoodi kartid inaad kasbato adiga oo aanad dareemin daal. Sidaas darteed haddii aad xiiseyneyso inaad qaadato heerarka dulqaadkaaga sare u kacsan, adigoo Bromantane ka dalbanaya Phcoker.com waa inuu ahaado waxa xigta ee aad sameyneyso.
Waxay dib u soo celisaa oo kordhisaa waxqabadka shaqada maskaxda iyo jirka
Sannadaha oo dhan, hawlaha niyadeed iyo maskaxeed ee jirkeena ayaa yarayn kara sababaada iyo arrimaha kale. Nasiib wanaag, Bromantane ayaa kaa caawin karta inaad dib u soo celiso. Iyadoo la kordhinayo qiyaasta unugyada muruqyada ay ka soo kaban karaan dhaqdhaqaaq jireed oo firfircoon, hawlaha jireed ee jireed ayaa la kordhiyaa. Hawlaha shaqada ee maskaxda, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ka fekertid si caqligal ah oo aad go'aanno fiican u gaarto adoon maskax ahaan u jilicsanayn. Markaa, marwalba mar walba maskax ahaan ayaad u joogtaa, oo ma dareemaysid fogaanta maskaxda.
Resistance to kulaylka
Marka jidhku ka dhaliyo kuleyl ka badan inta uu sii daayo, waxay u horseedi kartaa hyperthermia ama kulayl badan. Natiijo ahaan, waxaa laga yaabaa inaad halis ugu jirtid inaad qabato jirro daran. Mid ka mid ah saameynta Bromantane waa in uu jidhka ka horjoogsado in uu kuleylka iyo khafiifinta hyperthermia.
Hal dhibic oo nolosha ah, qof walbaa wuu ka walaacsan yahay. Dareemidda cabsida ama walwalka waxay noqon kartaa mid naadir ah ama joogto ah oo saameyn ku leh nolosha qofka oo si xun ula dhaqma. Si aad uga fogaato marxaladan oo kale, waxaad dooran kartaa inaad ku qaadato Bromantane.
Waxay kor u qaadaysaa tamarta waxayna tirtirtaa daal
Waad ogtahay dareenka aad heleyso markaad ka maqan tahay shaqada oo aad u baahan tahay inaad ka soo qayb gasho fadhigaaga jimicsiga. Inta badan malaha heerarka tamarta ayaa ah midkoodu ugu yar yahay oo kaliya qaadista lugahaagu waxay noqon karaan hawsha. Daalku ma saameynayo oo kaliya sida aan u qaban karno hawlaha jir ahaaneed laakiin waxa kale oo ay si xun u saameeyaan xidhiidhadaada bulsheed, nolosha qoyska iyo sida aad u dhaqmayso shaqada. Inkasta oo dad badani ayan garanaynin sida loola macaamilo, qaadashada Bromantane waa mid ka mid ah xalka ugu fiican ee lagu xakameynayo daalka. Haddii aad dareensan tahay inaad u baahan tahay koronto tamar leh oo kugu filan si aad u hesho maalinta oo dhan markaad qaadato gunnada Bromantane ayaa ah waxa ugu fiican ee la sameeyo. Bromantane waxay ku siinaysaa tamar badan adiga oo aan ku dhiirigelin xataa xitaa markaad dareentid in aad la seexatay oo isdifaacidu ay kugu dhacayso.
Waxay hagaajineysaa geeddi-socodka barashada iyo isuduwidda dhaq-dhaqaaqa
Marka aynu ka hadalno hagaajinta habka waxbarashada, macnaheedu waa in awoodda lagu fahmo waxyaabo cusub ayaa la kordhinayaa. Bromantane wuxuu kaa dhigayaa qof waxtar leh oo wax ku ool ah. Sidoo kale, waxay hagaajinaysaa isku-duwidda dhaqdhaqaaqa muruqyada, tani waxay ka ciyaari kartaa kaalin muhiim ah oo lagu horumarinayo waxqabadka cayaaraha.
Wuxuu dhiirrigeliyaa nidaamka difaaca jidhka
Yaa doonaynin in uu yeesho hab difaaca jirka wanaagsan? Lahaanshaha habka difaaca jirka oo kor u qaadaya waxay ka caawisaa jirkaaga inuu ka jawaabo infekshanka sida ugu macquulsan. Waa maxay xiiso leh in laga bilaabo qiyaasta ugu horreysa ee Bromantane ee aad qaadato, jirkaaga wuxuu la dagaallami karaa cudurrada si ka fiican sidii hore oo kale. Daaweynta kor u kacsan waxay sabab u tahay kororka heerka unugyada B-da ee jirka. Waa unugyada dhiiga cad ee caawiya jidhka ee la dagaallanka cudurrada. Taas macnaheedu waa in isticmaalka Bromantane, waxaad ka heli kartaa difaac ballaaran oo ka dhan ah cudurada iyo caabuqa. Dalbada Bromantane naga timaado oo aan ku riixno isbitaallada joogtada ah ee soo booqda!
Waxay kordhisaa xusuusta
Ma waxaad ku jirtay xaalad aadan dib u soo xasuusan karin wax dhacey daqiiqo kahor? Waxay noqon kartaa xoogsaarid, waxaana laga yaabaa inaad dareentid inaad la yaabi kartid hababka caafimaad ee ku habboon. Warka wanaagsani waa in Bromantane ay ka caawiso soo xajinta xusuusta iyo xasuusta. Faa'iidada tan waxay tahay inaad mar walba xusuusto waxyaabaha aad u baahan tahay. Waxay si weyn u hagaajineysaa xusuusta gaaban iyo muddada dheer sidaas darteed kor u qaadida awoodaada aad ku xasuusan karto.
Soo iibso Bromantane from Buyaas.com